Alimoni | Law & More B.V.
Kedu ihe bụ alimoni?
Na Netherlands, alimoni na - etinye ego maka ego ibi ndụ nke onye gị na ya lụrụ na ụmụaka mgbe ịgba alụkwaghịm. Ọ bụ ego ole anatara ma ọ bụ nke ị ga-akwụ kwa ọnwa. Ọ bụrụ na ịnweghị ego ị ga-ebi na ya, ịnwere ike ịnweta alimoni. Ga-akwụ ụgwọ ego ma ọ bụrụ na onye ọlụlụ mbụ gị enweghị ego zuru ezu iji kwado onwe ya mgbe ịgba alụkwaghịm ahụ gasịrị. A ga-atụle usoro ibi ndụ n'oge alụmdi na nwunye ahụ. May nwere ike ịnwe ọrụ dịịrị gị ịkwado onye òtù ọlụlụ mbụ, onye edenyere aha gị na ụmụ gị.
Alimony nwa na onye alimoni
N'ọnọdụ nke ịgba alụkwaghịm, ị nwere ike izute di na nwunye na inye nwatakịrị ego. Banyere alimonụ onye mmekọ, ịnwere ike ịmekọrịta nkwekọrịta banyere nke a na onye òtù ọlụlụ gị. Enwere ike itinye nkwekọrịta ndị a na nkwekọrịta ederede site n'aka onye ọka iwu ma ọ bụ notari. Ọ bụrụ na ọ nweghị ihe ekwenyela na alimonụ onye ọlụlụ n'oge alụkwaghịm ahụ, ị ​​nwere ike itinye akwụkwọ maka alimon ka oge na-aga ma ọ bụrụ, dịka ọmụmaatụ, ọnọdụ gị ma ọ bụ nke onye ọlụlụ mbụ gị gbanwere. Ọbụlagodi na onyinye alimon dị ugbu a enweghịzị ezi uche, ị nwere ike ịme nhazi ọhụụ.
N'ihe gbasara inye nwatakịrị ego, enwere ike ịme nkwekọrịta n'oge ịgba alụkwaghịm. Edere nkwekọrịta ndị a na atụmatụ nne na nna. N'ime atụmatụ a, ị ga-emekwa nhazi maka nkesa nlekọta nke nwa gị. Enwere ike ịchọta ozi gbasara atụmatụ a na ibe anyị gbasara atụmatụ nne na nna. Inye ụmụaka ego anaghị akwụsị ruo mgbe nwatakịrị ruru afọ 21. O nwere ike ịbụ na alimoni na-akwụsị tupu afọ a, yabụ ọ bụrụ na nwatakịrị ahụ nọọrọ onwe ya n'ihe gbasara ego ma ọ bụ nwee ọrụ nwere opekata mpe ụgwọ ụgwọ ntorobịa. Nne ma ọ bụ nna na-ahụ n'anya na-enweta nkwado nwatakịrị ruo mgbe nwatakịrị ahụ ruru afọ 18. Mgbe nke ahụ gasịrị, ego ahụ na-eruru nwa ahụ ma ọ bụrụ na ọrụ nlekọta ya dị ogologo. Ọ bụrụ na gị na onye òtù ọlụlụ gị agaghị enwe ike iru na nkwekọrịta nwa ga-eme, ụlọ ikpe nwere ike ikpebi na ndozi mmezi.
Etu esi agbakọ alimoni?
Alimoni na gbakọọ na-adabere ikike nke onye ji ụgwọ na mkpa nke onye nwere ikike mmezi. Ike bụ ego onye na-akwụ ụgwọ alimoni nwere ike ịhapụ. Mgbe a na-etinye alimoni ụmụaka na ndị mmekọ alimoni maka, nkwado nwa na-ebute ụzọ. Nke a pụtara na alimoni nwatakịrị na-ebu ụzọ gbakọọ, ma ọ bụrụ na enwere ohere maka ya ma emesịa, a ga-agbakọ ego alimonụ. Nwere ikike inwee onye ọlụlụ ma ọ bụrụ na ị lụrụ di ma ọ bụ nwunye ma ọ bụ na edenye aha gị. N'ihe banyere inye nwatakịrị ego, mmekọrịta dị n'etiti nne na nna adịghị mkpa, ọbụlagodi na ndị nne na nna anọghị mmekọrịta, ikike nke alimoni ụmụaka dị.
Ọnụ ego alimon na-agbanwe kwa afọ, n'ihi na ụgwọ na-agbanwekwa. A na-akpọ nke a ndeksi. Kwa afọ, a na-ahazi pasent nke Mịnịsta nke Ikpe na Nchebe na ngụkọta site na Statistics Netherlands (CBS). Ndị CBS na-enyocha mmepe ụgwọ ọnwa na azụmaahịa, gọọmentị na mpaghara ndị ọzọ. N'ihi ya, ego alimoni na-abawanye site na pasent a kwa afọ na 1 Jenụwarị. Nwere ike ikwenye ọnụ na ntinye iwu iwu anaghị emetụta alimoni gị.
Ogologo oge ole ka inororo mmezi?
Nwere ike ikwenye na onye gị na ole ị ga-akwụ ụgwọ alimoni ahụ. I nwekwara ike ịrịọ ụlọ ikpe ka ha debe oge. Ọ bụrụ na-enweghị nkwekọrịta ọbụla, iwu ga-achịkwa ogologo oge a ga-akwụ ụgwọ ya. Usoro iwu dị ugbu a pụtara na oge alimoni bụ ọkara oge nke alụmdi na nwunye yana nke kachasị nke afọ 5. Enwere otutu ghari na nke a:
Ọ bụrụ na, mgbe a gbara akwụkwọ maka ịgba alụkwaghịm, oge nke alụmdi na nwunye ahụ gafere afọ 15 na afọ nke onye na-akwụ ụgwọ mmezi adịghị ihe karịrị afọ 10 dị ala karịa afọ ezumike nka steeti metụtara n'oge ahụ, ọrụ ahụ ga-akwụsị mgbe afọ ezumike nka steeti eruola. Nke a bụ ihe kachasị afọ 10 ma ọ bụrụ na onye ahụ metụtara bụ afọ iri tupu afọ ezumike nka steeti n'oge ịgba alụkwaghịm. Mgbatị oge enwere ike ịkwụ ụgwọ ezumike nka steeti anaghị emetụta oge ọrụ. Ya mere, ihe ewepu bu alum di na nwunye ogologo oge.
Ihe nke abụọ metụtara ezinụlọ nwere obere ụmụaka. N'okwu a, ọrụ ahụ na-aga n'ihu ruo mgbe nwatakịrị nke a mụrụ site na alụmdi na nwunye ruru afọ 12. Nke a pụtara na alimoni nwere ike ịdịru karịa afọ 12.
Nke atọ bụ ndokwa maka mgbanwe maka ịgbatị ụgwọ maka ndị akwụ ụgwọ maka afọ 50 ma ọ bụ karịa ma ọ bụrụ na alụmdi na nwunye a dịgidere ma ọ dịkarịa ala afọ 15. Ndị na - akwụ ụgwọ mmezi a mụrụ na mbụ ma ọ bụ tupu 1 Jenụwarị 1970 ga - enweta mmezi maka afọ 10 karịa karịa karịa afọ 5.
Alimoni na-amalite mgbe abanyela iwu ịgba alụkwaghịm na ndekọ ederede obodo. Alimoni na - akwụsị mgbe oge ụlọ ikpe kpebiri. Ọ na-agwụkwa mgbe onye natara ya lụgharịrị di ma ọ bụ nwunye, biri ma ọ bụ banye na mmekọrịta edenyere aha. Mgbe otu n'ime ndị ọzọ nwụrụ, nkwụnye ego alimoni na-akwụsịkwa.
N'ọnọdụ ụfọdụ, onye ọlụlụ gara aga nwere ike ịrịọ ụlọ ikpe ka ịgbatị alimoni ahụ. Enwere ike ime nke a rue 1 Jenụwarị 2020 ma ọ bụrụ na nkwụsị nke alimoni ahụ ruru oke nke na enweghị ike ịchọrọ n'ụzọ ziri ezi. Site na 1 Jenụwarị 2020, iwu ndị a emeela ntakịrị mgbanwe: enwere ike ịgbatị alimoni ugbu a ma ọ bụrụ na nkwụsịtụ enweghị ezi uche maka ndị na-anabata ya.
Enwere ike ịmalite usoro iji chọpụta, gbanwee ma ọ bụ kwụsị alimoni ahụ. Lawyer ga-achọ onye ọka iwu. Ihe mbu bu itinye akwukwo. Na ngwa a, ị na-ajụ onye ọka ikpe ka ọ chọpụta, gbanwee ma ọ bụ kwụsị mmezi ahụ. Onye ọka iwu gị na-ewepụta akwụkwọ anamachọihe a ma nyefee ya na ndekọ nke ụlọ ikpe na mpaghara ebe ị bi na ebe ikpe a na-eme. Gị na onye òtù ọlụlụ gị anaghị ebi na Netherlands? Mgbe ahụ, a ga-eziga akwụkwọ ahụ n'ụlọ ikpe dị na Hague. Onye ọlụlụ mbụ gị ga-anata otu. Dị ka nzọụkwụ nke abụọ, onye ọlụlụ ibe gị nwere ohere iji nyefee nkwupụta nchekwa. Na agbachitere a, ọ nwere ike ịkọwa ihe kpatara enweghị ike ịkwụ ụgwọ alimon, ma ọ bụ ihe kpatara enweghị ike ịhazi ma ọ bụ kwụsị alimon. N'okwu ahụ, a ga-enwe ikpe ụlọ ikpe nke ndị mmekọ abụọ nwere ike ịkọ akụkọ ha. N'ikpeazụ, ụlọ ikpe ahụ ga-eme mkpebi. Ọ bụrụ na otu n’ime ndị ọzọ ekwenyeghị na mkpebi ụlọ ikpe ahụ, ọ nwere ike ịrịọ akwụkwọ mkpegharị ikpe n’ụlọ ikpe mkpegharị. N’okwu ahụ, onye ọka iwu gị ga-eziga akwụkwọ mkpesa ọzọ ma ụlọ ikpe ahụ ga-enyochagharị ikpe ahụ kpamkpam. A ga-enye gị mkpebi ọzọ. Nweziri ike ịrịọ Courtlọikpe Kasị Elu ma ọ bụrụ na ị kwadoghị mkpebi ụlọ ikpe a ọzọ. Thelọikpe Kasị Elu na-enyocha naanị ma Courtlọikpe Mkpegharị Ikpe akọwara ma tinye iwu na usoro usoro kwesịrị ekwesị yana yana mkpebi thelọ ikpe ahụ zuru oke nke ọma. N’ihi ya, Courtlọikpe Kasị Elu elebaghị anya n’okwu ahụ.
Have nwere ajụjụ gbasara alimoni ma ọ bụ ka ịchọrọ itinye maka, ịgbanwe ma ọ bụ kwụsị alimoni? Biko kpọtụrụ ndị ọka iwu iwu ezinụlọ Law & More. Ndị ọkàiwu anyị bụ ọkachamara na nchịkọta nke alimoni. Na mgbakwunye, anyị nwere ike inyere gị aka na mmemme alimoni ọ bụla. Ndị ọkàiwu na Law & More bụ ndị ọkachamara n'ọhịa nke iwu ezinụlọ ma nwee obi ụtọ iji duzie gị, ikekwe gị na onye òtù ọlụlụ gị, site na usoro a.
Previous Post Usoro nyocha na Chamber Enterprise
Next Post Usaljụ ọrụ